I-pyrocumulonimbus ye-wave wave yaseCanada nemiphumela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba amazinga okushisa ehlobo enyuka kakhulu kwezinye izindawo zeplanethi lapho kunesimo sezulu esifudumele. Lokhu kunjalo eCanada. Ngenxa yomlando wokushisa okwenzeka eCanada, kuye kwakhiwa imililo eminingana eye yakhiqiza pyrocumulonimbus. Lawa ngamafu akhiqizwa yimililo anemiphumela emkhathini efanele ukutadishwa.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukuze sikutshele konke odinga ukukwazi mayelana ne-pyrocumulonimbus nezindaba zemililo namandla okushisa eCanada.
1 Igagasi lokushisa lomlando eCanada
2 Umlando wesimo sezulu
3 Umsuka nezici ze-pyrocumulonimbus
4 I-pyrocumulonimbus enkulu
Igagasi lokushisa lomlando eCanada
Inkinga yaseCanada ngamazinga okushisa aphezulu yilokho Ngemuva kokushisa okukhulu obekuzophela, kwaqala elinye. Lesi simo sesenze amazinga okushisa aphakeme ngokweqile enza amahlathi abe sengozini yokusha kwehlathi. Le mililo yasendle ibe mikhulu futhi ingeze kuyo yonke inhlekelele ethinte iCanada.
Akukona nje kuphela ngomlilo oqothulayo, kodwa ngemvelaphi ye-pyrocumulonimbus. Lezi zakhiwo zamafu zenziwa ngemililo emikhulu ebhubhisayo, yona edala imililo emisha ngenxa yombani ewenza. Kumele sikuqonde ukuthi lezi zinhlobo zamafu ezihlotshaniswa nemililo zinamandla azo womkhathi. Imisebe ekhiqizwa ngenkathi kwakhiwa i-pyrocumulonimbus iwela ehlathini yengezwe ehoreni lokushisa kanye nemvelo eyomile futhi eshisayo imililo iyaqhubeka endaweni. Amanye ama-pyrocumulonimbus abhebhezele ukuvutha komlilo nombani obukeka njenge-apocalypse.
Amazinga okushisa afinyelela kuma-49.6 degrees abhalisiwe eCanada sonke lesi sikhathi lapho ukushisa kugcine khona. Lawa magugu ngokuvamile ayisihluku sangempela, hhayi kuphela ngenxa yendawo akuyo, kodwa ngenxa yenani uqobo lwalo. Futhi yilokho icishe ibe ngama-degree angama-50 okushisa ku-50ºN ebangeni. Lokhu kusho ukuthi sinamazinga okushisa asogwadule eCanada. Asikaze siwabone la mazinga okushisa kude le enyakatho yomhlaba kuze kube manje. Sikhuluma ngamazinga okushisa aqoshwe kumarekhodi womuntu wezulu nokushisa.
Umlando wesimo sezulu
Igagasi lokushisa eCanada selibe yisigameko esibalulekile sezulu esimenyezelwe yiNhlangano Yezwe Yezulu. Futhi sikhuluma nge umcimbi onemvamisa yokuphindaphinda eyodwa njalo emashumini ezinkulungwane zeminyaka. Umsuka wamaza okushisa kungenxa yokusakazwa kwe-polar jet. Ukuziphatha kwayo okungajwayelekile kwadala lolu hlobo lokushisa engxenyeni esenyakatho ye-hemisphere esenyakatho.
Singasigqamisa ikakhulukazi lesi simo ngoba ziyizinto ezaziwayo naseSpain. Yizinqubo ze-thermodynamic ezenzeka emkhathini ehlobo. Umsuka welanga lokushisa wenzeka olwandle iPacific. Isihluthulelo salokhu silele ekutheni le nqwaba yomoya ibiyehla phezulu njengoba ibheke ngasentshonalanga yeCanada. Onke amaphasela omoya ehla ukusuka phezulu ngenkathi kususwa lokhu, bathola inqubo yokushisa ngokucindezelwa kwe-adiabatic. Imvamisa lesi simanga sihlobene nesenzeko sokudonswa komhlaba esihlotshaniswa nokuvinjelwa kwe-anticyclonic okungathandeki okwakhiwe kulesi sifunda.
Umsuka nezici ze-pyrocumulonimbus
Phambilini besikhuluma ngamafu ukwakheka kwawo okunomsuka womlilo eCanada. Ukushisa okushisayo kubange igagasi lomlilo omkhulu futhi obhubhisayo wehlathi othatha sonke isifunda futhi ubhubhise konke okulandelayo. Ama-pyrocumulonimbus amakhulu abe makhulu futhi maningi kakhulu. Ngisho nemililo ye-apocalyptic e-Australia yeminyaka edlule ayenzanga amafu amakhulu kangaka asabekayo.
Luhlobo lwefu lokuduma kwezulu elinomsuka walo ekushiseni okwenziwe umlilo wehlathi. Kulezi zimo, izimo zomkhathi zanele ukukhiqiza lolu hlobo lwamafu.
Kuyinto eyodwa ukwakha i-pyrocumulonimbus yobukhulu obujwayelekile ekhiqizwa yizimo zemvelo ezenzeka emlilweni wehlathi. Ngokuya ngokushisa, ubukhulu bezimila nezimo zomkhathi, lawa mafu angaba makhulu noma amancane. Kunemicimbi eminingi ephathelene nemililo yasendle, kepha ososayensi abaningi bayakuqinisekisa ukuthi lokhu kuyingozi enkulu kunazo zonke ezake zabonwa.
Futhi lesi yisiphepho somlilo esikhiqize izinkulungwane zemibani futhi cishe nemililo emisha engenakubalwa. Ukuvunguza okubi kwalezi zimo zemvelo nokwakheka kwePyrocumulonimbus kusekelwe eqinisweni lokuthi lawa mafu enza izinkulungwane zeziteleka zombani eziphinde ziveze eminye imililo. Lokhu kuvunguza komlilo kungadala umonakalo omkhulu emahlathini.
Siyazi ukuthi imililo yehlathi iyingxenye yomjikelezo wemvelo nokuthi kunezitshalo ezizuzayo kuyo. Kodwa-ke, ukubhujiswa okunjalo kuzothatha isikhathi eside ukubuyisa. Uma izimo zomkhathi zanele, i-pyrocumulonimbus ingakha i-mesocyclone futhi ibe yi-pyrosupercell. Lezi zimo zingaholela ezinkanyaneni ezinamandla ezingandisa inkinga. Ukuba yisakhiwo esidlulisayo, ingahlela futhi idale izinhlekelele ezinkulu.
Kumele ucabange nje ngesizukulwane samafu esiphepho angenza iziphepho, umbani, imililo emisha, njll. Kuyinhlekelele ngokuphelele. I-pyrocumulonimbus enobudlova ingabonakala phezulu futhi yinto enhle ukubona.
Kumele kubhekwe ukuthi lezi zinhlobo zezimo ezibucayi ziye zabangelwa ukuguquguquka kwesimo sezulu ngenxa yokuthi kunamazinga okushisa aphezulu ngokungavamile endaweni lapho ngokuvamile kungekho khona. Sikhuluma ngakho ICanada inamazinga okushisa aphansi ngokuvamile nalapho kuneqhwa elinzima minyaka yonke. Kulolu hlobo lwe-latitude kuyamangaza ngokuphelele ukuba namazinga okushisa ajwayelekile ezindaweni zemvelo zasogwadule.
Njengoba ukwazi ukubona, igagasi lokushisa laseCanada seliwumcimbi oyingqophamlando ozokhunjulwa eceleni komlilo wase-Australia weminyaka edlule. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngomsebenzi wokushisa waseCanada kanye ne-pyrocumulonimbus.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » I-Pyrocumulonimbus ne-wave wave eCanada
IPerito Moreno Glacier